धादिङ । देशभर केन्द्रीय, प्रादेशिक, जिल्लागत र स्थानीय तहमा सहमति गरी बनाएको गठबन्धन धरमराएसँगै धादिङका विभिन्न स्थानीय तहमा समेत त्यसको प्रत्यक्ष असर देखा परेको छ । केही गाउँपालिका र वडाहरुमा विभिन्न पार्टीका तर्फबाट...
काठमाडौँ । काठमाडौँको न्युरोडमा भारीको खोजीमा नाम्लो बोकेर हिँड्दै गर्नुभएका ७३ वर्षीय ज्ञानबहादुर भण्डारीलाई पनि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रपछिको दोस्रोे स्थानीय तहको निर्वाचनले छोएको छ । धादिङको गल्छी...
काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएको ७४ वर्षपछि मुलुकभित्र अर्को नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको भैरहवा (रुपन्देही) मा निर्माण गरिएको...
काठमाडौं । जनकपुर जयनगर रेल सेवा आजदेखि सञ्चालनमा आउने भएको छ । आइतबारदेखि रेल सेवा नियमित रूपमा सञ्चालन हुने नेपाल रेल्वे कम्पनीले जनाएको छ । आजदेखि बिना यात्रु (ड्राई रन) चलाइने रेलको औपचारिक उद्घाटनपछि यात्रु राखेर चलाइनेछ...
बागलुङ । बागलुङको बलेवा विमानस्थल धावनमार्ग कालोपत्र सुरु भएको छ । विसं २०७७ फागुनमै कालोपत्र गर्नुपर्ने विमानस्थलको धावनमार्ग कालोपत्रको काम पटक–पटक प्रभावित बन्दै आएको थियो । गत असारमै सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउने...
कोभिड–१९ को सङ्क्रमणबाट बच्न पूर्वीय दर्शनमा आधारित जीवनशैलीलाई अपनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । वाग्मती सफाइ महाअभियानको हामी साथ छौँ कार्यक्रमले आज जुम प्रविधिबाट आयोजना गरेको ‘के गर्ने ? के नगर्ने ?’ विषयक अन्तरक्रिया...
४ जेठ, काठमाडौं । अब प्रहरीले मास्क नलगाउनेलाई जरिवाना तिराउने र होल्डिङ सेन्टरमा राखेर कारबाही गर्न नपाउने भएको छ । मंगलबार सर्वाेच्च अदालतले यससँग सम्बन्धित मुद्दामा फैसला गर्दै निःशुल्क मास्कको व्यवस्था नहुँदासम्म मास्क...
४ जेठ, काठमाडौं । कोरोना भाइरस महामारीका कारण यो वर्ष पनि उपत्यकाको सबैभन्दा लामो जात्राको रुपमा रहेको रातो मत्स्येन्द्रनाथको रथयात्रा सांकेतिक रुपमा मात्रै गरिएको छ । रथ निर्माणको काम विधिवत् रुपमा पूरा गर्दैगर्दा कोरोना...
३ जेठ, काठमाडौं । कुनैपनि सेवाको शुल्क तिरेपछि ग्राहकले बिल पाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ तर, सरकारी कार्यालयमै बिल पाउन मुस्किल हुन थालेको छ । कोभिड–१९ बाट बच्न जारी निषेधाज्ञाका बेला अत्यावश्यक सेवामा पर्ने दूर सञ्चार...
३ जेठ, काठमाडौं । मकवानपुरको थाहा नगरपालिकामा प्रत्येक तीन वर्षमा लाग्ने प्रसिद्ध बाराही जात्रा कारोना महामारीका कारण यस वर्ष पनि प्रभावित हुने भएको छ । अघिल्लो जात्रा सकिएको तीन वर्ष पुगेपछि गत वर्ष नै बाराही जात्रा...
३१ वैशाख, काठमाडौं । पुरातत्व विभागका पूर्व महानिर्देशक साफल्य अमात्यको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ । स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि ३ दिनअघि काठमाडौंको वीर अस्पतालमा भर्ना भएका उनमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो ।...
३० वैशाख, काठमाडौं । ‘जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी’ अर्थात् आफूलाई जन्म दिने आमा र जन्मिएको ठाउँ स्वर्गभन्दा पनि प्यारो हुन्छ । रामायणमा आफ्ना भाइ लक्ष्मणलाई सम्झाउँदै भगवान रामले भनेको यो उक्तिले अहिलेको...
३० वैशाख, काठमाडौं । वाङ्मय शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीको १०२ औँ वर्षमा पुगेका छन् । संस्कृतिविद् जोशीको जन्मोत्सवका अवसरमा ललितपुर महानगर प्रमुख चिरीबाबु महर्जन लगायतले उनको सुस्वास्थ्य एवं दीर्घायुको कामना गरेका छन् ।...
३१ वैशाख, काठमाडौं । ईस्लाम धर्मावलम्वीहरूको महान पर्व रमजान शुक्रबार धुमधामसँग मनाउने तयारीमा जुटेका छन् । यो पर्वलाई ‘इद उल फित्तर’ भनिन्छ । यो पर्वका लागि मुसलमानले एक महिनासम्म रोजा(उपावास) बसेका थिए । नयाँ वर्षसँगै...
काठमाडौं । विशाल बजार कम्पनीको शेयरमा आज निकै चलखेल भएको छ । अघिल्लो दिन ७ हजार ४ सय ६० रुपैयाँमा कारोबार भएको सो कम्पनीको शेयर बिहीबार पहिलो केही मिनेटमा नै सकारात्मक सर्किट लागेर ८ हजार २ सय ८ रुपैयाँ पुगेको थियो भने त्यसको...
काठमाडौं । ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्सको शेयरमा बुधबारको बजारमा निकै चलखेल भएको छ । सो इन्स्योरेन्सको शेयरमा विगत केही दिनदेखि निरन्तर सकारात्मक सर्किट लाग्दै आएकोमा बुधबार पनि बजार खुलेको केही मिनेटमै सकारात्मक सर्किट लागेर...
एनआईसी एसिया बैंकको ‘अर्गानिक रियालिटी’ : अरुले किन सकेनन्, उसले किन सकिरह्यो ?
काठमाडौं । देशमा २७ वटा वाणिज्य बैंकहरु सञ्चालनमा छन् । सरकारी लगानीमा रहेका ३ पुराना बैंकहरु नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंकबाहेक अन्य निजी क्षेत्रबाटै सञ्चालित छन् । निजी बैंकहरुमध्येमा पनि विदेशी...
काठमाडौं । सिईडिबी हाइड्रोले आईपीओ निष्काशनको मिति तोकेको छ । सो कम्पनीले बुधबार विवरणपत्र प्रकाशन गर्दै यस्तो मिति तय गरेको हो । कम्पनीले बैशाख १७ गते शुक्रबारका दिनबाट आईपीओ निष्काशनको मिति तय गरेको हो । कम्पनीको २५ लाख १६...
गरिमा विकास बैंकले ईपीएस २५ रुपैयाँ ! अन्य सूचक कस्ता ?
काठमाडौं । गरिमा विकास बैंक लि. ले चालु आवको तेस्रो त्रैमाससम्मको वित्तीय विवरण प्रस्तुत गरेको छ । ३ अर्ब ७७ करोड चुक्ता पुँजी रहेको सो बैंकले समीक्षा अवधिमा ७८ करोड ३० लाख खुद नाफा कमाएको हो । अघिल्लो आवको सोही अवधिसम्म बैंकको...
सिटिजन्स बैंकले प्रस्तुत गर्यो कमालको विवरण, वितरणयोग्य मुनाफामा २२७ प्रतिशतको वृद्धि
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लि.ले चालु आवको तेस्रौ त्रैमाससम्मको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण प्रकाशन गरेको छ, जसमा बैंकले वितरण योग्य मुनाफामा २२७ प्रतिशतको वृद्धि गरी १ अर्ब ५४ करोड कायम गरेको छ । सो अवधिको बैंकको...
भासिएको चन्द्रागिरी, के का लागि जोगाएर राख्ने अब शेयर
काठमाडौं । चन्द्रागिरी हिल्स लि.ले चालु आवको तेस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ । काठमाडौंको चन्द्रागिरीमा केवलकार तथा लक्जरी रिसोर्ट सञ्चालन गर्दै आएको सो कम्पनीले चालु आवको तेस्रो त्रैमाससम्ममा १८ करोड ११...
एनआईसी एसिया लघुवित्तको शेयरमा ठुला लगानीकर्ताको यस्तो चलखेल, साना लगानीकर्तालाई यसरी फसाइयो
काठमाडौं । नेपाली धितोपत्र बजारको इतिहासमै सबै आवेदकलाई शेयर परेको एकमात्र लघुवित्त कम्पनीको शेयर कारोबारमा बिहीबार निकै चलखेल भएको छ । कारोबार खुलेको केही दिनमै स्वदेशी लघुवित्तसँगको मर्जरका कारण लामो समयदेखि कारोबार...
एनआईसी एसिया लघुवित्तको शेयर : यी ५ सम्भावनाका कारण साना लगानीकर्ताका लागि छ माइलस्टोन
काठमाडौं । एनआईसी एसिया लघुवित्त कम्पनीको शेयरमूल्यमा विगत केही दिनदेखि निरन्तर सकारात्मक सर्किट लागिरहेको छ । साविकको स्वदेशी लघुवित्तसँगको मर्जरले लामो समयदेखि कारोबार रोक्का रहेको सो लघुवित्तको शेयर सोमबारको बजारमा...
काठमाडौं । १२७ रुपैयाँ प्रतिशेयर आम्दानी रहेको एक लघुवित्त कम्पनीको करिब २० करोडको आईपीओ छिट्टै बजारमा आउने भएको छ । मोरङको कटहरीमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाले १९ करोड ७७ लाख ३० हजार बराबरको...
काठमाडौं । एनआईसी एसिया लघुवित्तको शेयरमूल्यमा सोमबार पनि तीव्र उछाल आएको छ । अघिल्ला दिनहरुमा केही कारोबारपछि मात्रै शेयरमूल्यमा सर्किट लाग्ने गरेकोमा सोमबारको बजारमा भने १० कित्ताको कारोबारमा नै सर्किट लागेको देखिएको...
१८० रुपैयाँ कमाइ भएको महिला लघुवित्तको शेयर मूल्य कति पुग्ला ?
काठमाडौं । हाल नेप्सेमा सूचीकृत लघुवित्त कम्पनीहरुमध्ये राम्रा कम्पनीहरु भनेर चिनिने लघुवित्त कम्पनीहरुको शेयरमूल्य २००० भन्दा बढी रहेको छ भने लघुवित्त कम्पनीको ट्याग मात्रै लागेका कम्पनीहरुको मूल्य पनि १००० र�...
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज(नेप्से)मा सूचीकृत रहेको एवं धितोपत्र बजारमा प्रतिशेयर रु. पन्ध्रसय रहेको एक कम्पनीको आम्दानी दश रुपैयाँ रहेको छ । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले प्रकाशित गरेको दोस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरणअनुसार...
नेपाल इन्फ्राष्ट्रक्चर बैंकको शेयर कारोबार आइतबारबाट खुल्ने, पहिलो कारोबारका लागि रेन्ज तय
काठमाडौं । नेपाल इन्फ्राष्ट्रक्चर बैंक(निफ्रा)को शेयर कारोबार आइतबारबाट खुल्ने भएको छ । नेप्सेले दिएको जानकारी अनुसार नेप्से र बैंकबीच आज अर्थात् २०७७ माघ २९ मा कारोबारसम्बन्धी सम्झौता भएको हो र त्यसको दोस्रो दिन अर्थात्...
नबिल बैंकसँगको मर्जरको हल्लामा उचालिएको एनसीसी बैंकको शेयर मूल्यमा करेक्सन, मर्जरको सम्भावना कति ?
काठमाडौं । अर्बपति व्यापारी विनोद चौधरीको परिवारका केही सदस्यले ठुलो परिमाणमा एनसीसी बैंकको शेयर खरिद गरेको आशंकापश्चात् आइतबारसम्म उचालिएको सो बैंकको शेयर मूल्यमा सोमबार सामान्य करेक्सन आएको छ । इन्साइडर ट्रेडिङको...
काठमाडौं । चन्द्रागिरि हिल्सले सर्वसाधारणको लागि आईपीओ जारी गर्ने भएको छ । पुष २४ गतेदेखि प्रतिकित्ता एक सय रुपैयाँ अंकित दरले १५ करोड ३४ लाख ९१ हजार रुपैयाँ बराबरको १५ लाख ३४ हजार ९१ कित्ता शेयर जारी गर्न लागेको हो । पहिलो...